Izinhlobo amasu okuthuthukisa amabhizinisi
Strategy - i-eklanyelwe uhlelo eziyinkimbinkimbi, edingekayo ukuze afinyelele imigomo yenkampani kanye ukufeza ukuthunywa. Ngokuvamile, isu akhiwa abaphathi inkampani esizwa abaphathi emazingeni ahlukahlukene zokuphatha. Izinhlobo amasu zahlukahlukene. Ngamunye wabo olandela Izinhloso ezithile, ngakho-ke isetshenziswa kuphela uma empeleni kudingeka. Cabangela izinhlobo ezinkulu amasu wokuthi zonke izinkampani kumele avame ukusetshenziswa ukuba afinyelele imigomo yabo.
amathuba Strategy ezimakethe / impahla
· Development Product - ngempumelelo uma inkampani lavuselelwa omkhulu phakathi abathengi. Ungazama lokhu okulandelayo: ukusetshenziswa okujwayelekile (esivamile) ukumaketha izimali ukwenza ukukhangisa gxila kulokho imikhiqizo emisha kunokubuthwa amadala, ukugcizelela kakhulu izindlela ezintsha, okuyinto kuhlobene nge imikhiqizo kakade kwethulwa.
· Ukungena Deep wemakethe - ndlela iphumelela kakhulu lapho inkampani isebenza kwi ajwayelekile, hhayi kwaneliswe emakethe. Into esemqoka lapha - banciphise izindleko zokukhiqiza. Ungasebenzisa: olunzulu ukukhangisa, izaphulelo, izinzuzo, ukusungula ukulawula umsebenzi izimbangi ', ukuthengisa izimpahla ngentengo ephansi kuka izimbangi.
· Development Market - ngempumelelo ekwandiseni emakethe, ukuvela zokusebenza ezintsha imikhiqizo ethandwa futhi owaziwa. izenzo Inkampani kungenzeka kanje: kwema- izimakethe zesifunda, isifiso ukwandisa yokuthengisa imikhiqizo ekhona izimakethe, faka entsha izingxenye emakethe, lapho funa esisebenzayo singaneliswa, ekunyusweni izimpahla esetshenziswa ukusebenzisa imizamo okukhulu.
· Progressive - kusho ukukhula inkampani ngokusebenzisa wokutholakala nokusetjenziswa izitshalo, okuyinto zitholakala phakathi nomkhiqizi futhi umsebenzisi sekupheleni.
· Kwamaciko - kusikisela ukukhula inkampani, okuyinto luzoqala ngokusebenzisa yokufuna izinto ezintsha engahluziwe ukudalwa ezingaphansi, ekukhiqizeni ngamanani amancane izimpahla.
· Ovundlile - imisebenzi yebhizinisi ziqondiswe ukumuncwa encintisana, noma ukusungula ukuqapha eqinile yemisebenzi yabo emakethe.
· Ovundlile - ukuthola izindlela lokukhula izimakethe ezikhona njengamanje bese ngokusebenzisa ukukhuthazwa kwemikhiqizo emisha, ihlukile kuleyo esetshenziswa. Kulokhu, umkhiqizo omusha kufanele yenzelwe amakhasimende odlule.
· Nhlanganisela - ukwandisa ibhizinisi ngokusungula imikhiqizo engeyena exhumene imikhiqizo efanayo.
· Eyindilinga - ukucinga noma ukusetshenziswa amakhono ibhizinisi ekhona futhi imali eyengeziwe ukuba kukhululwe entsha imikhiqizo, izimpahla kanye namasevisi afana ekhona imikhiqizo, izimpahla kanye nezinsizakalo ibhizinisi.
Eqhubeka izinhlobo amasu, sinake okulandelayo:
Isu maqondana umkhiqizo
· Izindleko okuphansi - uqondisa ukuphathwa kwenkampani ku ekukhiqizweni izimpahla, ngenxa okuyinto kungenzeka ukunciphisa intengo futhi ukunciphisa izindleko.
· Lokuhlala - uqondisa ukuphathwa ukusebenza izimpahla ezihlukile noma akhethekile kakhulu, amasevisi, imikhiqizo.
· Ukwehlukanisa - inkinga manje umkhiqizo ezikhangayo ezokwenza nentshisekelo abathengi. Lapho lo mkhiqizo itholakala izinguqulo eziningana, okungukuthi ezahlukene design, izinga kanye emaphaketheni.
Amasu amabhizinisi amancane
· Usayizi kahle - sisetshenziswa ezindaweni zamabhizinisi ukuthi ukhiqize inzuzo encane ngoba amabhizinisi ezinkulu.
· Kopisha - khaphi amabhizinisi amancane ukukhiqiza imikhiqizo kuyoba izinguqulo engabizi abajwayelekile eliphezulu futhi kuyabiza imikhiqizo abakhiqizi owaziwa.
· Ukusetshenziswa izinzuzo nezinzuzo producer enkulu - isibonelo kungaba Franchise - sokusebenzelana phakathi abakhiqizi ezincane nezinkulu, lapho umkhiqizi omncane unelungelo isikhashana ukusebenzisa uphawu lokuhweba nomakhi ezinkulu, wajabulela ubuchwepheshe yakhe kanye nempahla.
· Ukuhlanganyela imikhiqizo umenzi ngobukhulu - Iqiniso liwukuthi ukuthi izinkampani ezinkulu wahlanganyela udaba imikhiqizo eziyinkimbinkimbi futhi ayedabula zonke izigaba ukukhiqizwa bebodwa, kudingeka uhlele ukukhiqizwa yabadobi ukuthi akuyona ngempumelelo ne-RIO njalo. Yingakho nomkhiqizi ezinkulu kunenzuzo ukumisa ukukhiqizwa yabadobi futhi umane ukuthenga imikhiqizo lakamuva.
· "Ukuvuna" - ukwenqaba nokuzibandakanya kwesikhathi eside ebhizinisini ukuze uthole imali engaphezulu esikhathini esifushane.
· Elimination - "sobunye 'amabhizinisi, lapho omunye wabo siqedwa ukuze kuncishiswe izindleko ukusebenza ngokuhlanganyela.
· Abantu Ngokukhetha anciphise izindleko - yesikhashana esifushane eside ngesilinganiso, injongo okuyinto zinciphise izindleko zokukhiqiza, ukunciphisa abasebenzi ukuqasha, ukukhiqizwa encishisiwe kwezimpahla lapho usongo obuphathekayo nobukhulu bale nkinga.
· Abantu Ngokukhetha ukunciphisa amayunithi - ukudayiswa noma kuvalwe ibhizinisi ezingenanzuzo, amayunithi unviable. Injongo eyinhloko - ukuthola izimali sokuthuthukiswa a ibhizinisi eside, emisha, njll
Ngakho, izinhlobo amasu - iyithuluzi elinamandla sokuthuthukisa yimuphi, ngisho ibhizinisi eyinhlekelele kakhulu. Kuyinto ngenxa ezihlukahlukene zabo Ungakhetha isu ezifanele kakhulu ukuphuma esimweni esithile. Izinhlobo amasu avumele inkampani ukuletha ukumaketha imikhiqizo yayo entsha, ngempumelelo ukuhlela ukudayiswa kwemikhiqizo ubudala, ukwethula ubuchwepheshe obusha emsebenzini wokukhiqiza esifushane, inzuzo lapho ngaphambili kwakungenakwenzeka ukuba kukhishwe.
Ibhizinisi imithombo. Izimpawu amaqembu ayinhloko
Management Accounting - uhlelo olucacile
Ukuhlela Business ngesikhathi ibhizinisi: imithetho, izimiso umdwebo kanye nezigaba eziyinhloko
Umlando ibhizinisi kanye nencazelo yayo
Inani ukubandlulula nezinhlobo zayo
Umkhiqizo Precious - bran. Ukusetshenziswa ukuba umzimba.
"Nitroxoline-UBF": incazelo, imihlahlandlela isicelo, ukubuyekezwa
L'Oreal "oluthandwayo": a kukhanye brilliant ukuze izinwele zakho
Lapho abesifazane abakhulelwe livela ubisi - lokhu kuyinto evamile noma zokugula?
I amathiphu izinwele. Penda nabo yimuphi umbala?
Nezimagqabhagqabha Okumhlophe nolimi ingane
Calorie Cinnamon kanye nokusebenzisa kwayo isisindo ukulahleka
Indlela ukususa ukudakwa utshwala ekhaya? Indlela ukwelapha a Hangover ekhaya?